Double Counter (GAB-PLAN) by Burma Democratic ... 193 views
(2010) CPPF - Outcome of the Myanma... by Burma Democratic ... 338 views
RFA MYNT 10.2.2011pdf by Burma Democratic ... 269 views
Flyer to Myanmar 1 by Burma Democratic ... 914 views
Military Network inside Burma by Burma Democratic ... 210 views
Final Draft Mirror Online statement by Burma Democratic ... 300 views
1. ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဝင် နိုင်ငံရေးပါတီများနှင့် လူပုဂ္ဂိုလ်များသိုဲ့မေတ္တာရပ်ခံ နှိုးဆော်ချက် ၂၆၊ ၁၁၊ ၂၀၁၀။ နAဖစစ်Aုပ်စု၏ နိုင်ငရေး တရားဝင်မှု ရရှိရေး Aားထုတ်မှုဖြစ်သည့် AတုAယောင်ံရွေးကောက်ပွဲသည် ပြည်တွင်းပြည်ပမှ ကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချမှုများဖြင့် ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ ရွေးကောက်ပွဲတွင် နိုင်ငံရေးAင်AားစုAားလုံး ပါဝင်နိုင်ရေးAတွက် နိုင်ငံတကာမှတောင်းဆိုမှုများကို မျက်ကွယ်ပြု၍ ကျင်းပခြင်းဖြစ်သည်။ တချိန်တည်းမှာပင် နိုင်ငံ တ၀ှန်း၌နိုငငံရေးAကျU်းသာ်း(၂၂၀၀) ကျော်Aား ဆက်လက် AကျU်းချထားဆဲ ဖြစ်သည်။ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပြိုင်ဘက်ပါတီများ၏ လွတ်လပ်စွာ စည်းရုံးလှုပ်ရှားခွင့်ကို ပိတ်ပင်ခဲ့သည်သာမက ရွေးကောက်ပွဲAတွင်း၌လည်း မဲလိမ်ခြင်း၊ မဲခိုးခြင်း၊ ဘက်လိုက်ခြင်းများကို နိုငင်ံတ၀ှနး၌ ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း ကျူးလွန်ခဲ့ကြသည်။ ထို့Aပြင် မသမာသည့် ကြိုတင်မ်ဲများဖြင့် ၎င်းတို့ လက်ကိုင်တုတ် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများAား Aနိုင်ပေးခဲ့သည်။ AတုAယောင် Aမျိုးသားညီလာခံမှ ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည့် စစ်တပ်ကြီးစိုးရေး စစ်ကျွန်ဖွဲ့စည်းပုံ (၂၀၀၈) Aား နာဂစ်မုန်တိုင်းဒဏ် ကပ်သင့်နေသည့်ကြားမှ Aဓမ္မ Aတည်ပြုခဲသည့်နည်းတူ ယခုရွေးကောက်ပွဲAားလည်း ဂီရိမုန်တိုင်းဒဏ်ကြား၌ပင် Aဓမ္မကျင်းပခဲ့သည်။့ ဝန်ထမ်းများ စစ်သည်စစ်သား မိသားစုများနှင့် ဆင်းရဲသား ပြည်သူAများAပြားတို့ ၎င်းတို့ဆန္ဒမပါဘဲ ကြိုတင်မဲAဖြစ် စစ်Aုပ်စုAလိုကျ ပေးခဲ့ကြရသည်။ ရွေးကောက်ပွဲ၌ (၆၀)ရာခိုငနန်းကျော် မဲပေးခဲ့သည်ဟု စစ်Aုပ်စုမှ ကြေငြာခဲ့သော်လည်း လေ့လာသူများ AဆိုAရ်ှုAဓမ္မကြိုတင်မဲများ AပါA၀င် (၄၀) ရာခိုင်နှုန်းေAာက်သာ မဲပေးခဲ့ကြသည်။ ထို့ကြောင့် ဤရွေးကောက်ပွဲရလာဒ်သည် ပြည်သလူထ၏ ဆန္ဒAား လုံးဝကိုယ်စားပြုုခြင်းမရှိပေ။ ဤရွေးကောက်ပွဲရလာဒ်Aပေါ် Aခြေခံသည့် လွှတ်တော်များနှင့် Aစိုးရတို့Aားနိုင်ငံတကာ မိသားစုများ၊ Aစိုးရများမှ AသိAမှတ် မပြုကြပါ ရန် မေတ္တာရပ်ခံAပ်ပါသည်။ ရွေးကောက်ပွဲ မကျင်းပမီ မည်သို့သော ညစ်ပတ်ဘက်လိုက်မှုများ လုပသည်ဖြစ်စ်ေကျင်းပသည့်နေ့တင်မွူတရားမျှတမှု ရှိနိုင်လိမ့်မည်ဟူသော မျော်လင့်ချက်ဖြင့် သီးခံပြီးဝင်ရောက်ရွေးချယ်ခံခဲ့ကြသော ကိုယ်စားလှယ်များAနေဖြင့် မထင်မတ်သော ဗြောင်ကျကျှလိမညာမှုများကြောင့် နိုင်လျှက်နှင့် ရှုံးရသည့်Aဖြစ်များကို ကြုံတွေ့ခံစားရပြီးဖြစ်သည်။်
2. ရွေးကောက်ပွဲတွင် ရှုံးသည်ဟု ပြောပြီးမှ ပြန်လည်Aနိုင်ပေးခံရသည့် ကိုယ်စားလှယ်တော်များ၊ ရွေးကောက်ပွဲတွင် မဖြစ်စလောက်Aမတ်နေရာရသည့် ပါတီများ Aားလုံးတို့သည်လွှတ်တော်တွင် တဖက်သတ်Aနိုင်ယူသည့် ကြံ့ဖွတ်ပါတီ၏ ဗိုလ်ကျစိုးမိုးမှုကို မလွဲမသွေခံစားရတော့မည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် Aလိမ်Aညာမတရားမှုများဖြင့် ပေါ်ပေါက်လာသည့် လွှတ်တော်AားAသိAမှတ်ပြု တက်ရောက်ခြင်းမပြုရန် AလေးAနက် Aကြံပြုတိုက်တန်းAပ်ပါသည်။ွထိုမသမာသောရွေးကောက်ပွဲရလာဒ်ကို ဆန့်ကျင်ရန်Aတွက် ရွေးကောက်ပွဲဝင်ပါတီများနှင့် တသီးပုဂ္ဂလများက ၎င်းတို့ကို ယုံကြည်၍ မဲပေးခဲသော ပြည်သူ့ဆန္ဒကို လေးစားသော့ Aားဖြင့် ပြည်သူဘက်မှ ရပ်တည်ကာ ပေါ်ပေါက်လာမည့် AတုAယောင် Aမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ တိုင်းဒေသ/ ပြည်နယ်လွှတ်တော်များသို့ တက်ရောက်ခြင်းမပြုပဲ သပိတ်မှောက်တုက်ပွဲဝင်ကြပါရန် လေးနက်စွာ Aကြံပြုတိုက်တွန်း Aပ်ပါသည်။ိပြည်တင်းပြည်ပရွှိနိုင်ငံရေးAင်AားစုများAားလုံး နAဖစစ်Aုပ်စု ခင်းပေးသောလမ်းမှားသို့လိုက်သည့်ကျင့်စU်ကို စွန့်လွှတ်ကြရန် Aချိန်ကျရောက်ပြီဖြစ်ကြောင်း သတိပေးနှိုးဆော်Aပ်ပါသည်။၂၆၊ ၁၁၊ ၂၀၁၀။လေးစားစွာဖြင့်(၁) Uီးခင်မောင်ကြည် (Aဝေးရောက်သံတမန်၊ Aင်္ဂလန်)(၂) Uီးထွန်းေAာင်ကျော် (Aမေရိက)(၃) UီးေAာင်သန်းUီး (ဂျာမဏီ)(၄) Uီးသန်းဆွေ (ဂျပန်)(၅) Uီးမိုးသီးဇွန် (ထိုင်း)(၆) Uီးကျော်သန်း (Aိန္ဒိယ)(၇) ဆရာတော် Uီးပညာဇောတ (Aိန္ဒိယ)(၈) ဆရာတော် Uီးပညာသီရိ (Aိန္ဒိယ)(၉) ဆရာတော်Uီးဇ၀န(ထိုင်း)(၁၀) Uီးမောင်မောင်( Aင်္ဂလန်)
3. (၁၁) Uီးစိုးညွန့်(Aမေရိက)(၁၂) Uီးဂျော့စကြာဟိန်း (ခ) ကိုဂျော်ဂျီ (သြစတေးလျ)(၁၃) UီးေAာင်ကိုး (Beyond Rangoon- ပြင်သစ်)(၁၄) UီးTimothyဇော်ဇော် (ကနေဒါ)(၁၅) Uီးမင်းနိုင် (ဘတ်ဖဲလိုး- Aမေရိက)(၁၆) UီးေAာင်မြင့်ထွန်း (ဖို့ဒ၀ိန်း - Aမေရိက)်(၁၇) Uီးစိုးလွင် (ဆစ်ဒနီ၊ သြစတေးလျ)(၁၈) Uီးမူးသာ (Aမေရိက)(၁၉) Uီးသန်းဝင်း (ရကသ- Aမေရိက)(၂၀) Uီးဇော်မင်းခိုင် (ဂျပန်)(၂၁) Uီးကျော်ကျော် (NLD- မလေးရှား)(၂၂) ဒေါက်တာသန်းထိုက် (ပိုလန်)(၂၃) UီးေAာင်သူ (ဂျာမဏီ)(၂၄) UီးေAးမြင့် (ဂျာမဏီ)(၂၅) UီးကိုကိုေAာင် (ဂျပန်)(၂၆) Uီးမောင်လွင် (ကိုးရီးယား)ဆက်သွယ်ရန်Uီးခင်မောင်ကြည် :+ ၄၄-၂၀၈-၅၈၀၁၇၂၈Uီးထွန်းေAာင်ကျော်:+၁၆၀၇၃၃၉၆၀၅၄UီးေAာင်သန်းUီး :+၄၉-၁၇၃၅၃၄၇၅၃၄ဒေါက်တာသန်းထိုက် :+၄၈-၂၂၅၀၃၇၉၉၁၃၂Uီးမိုးသီးဇွန် :+၆၆-၈၄၄၅၉၁၁၈၆